搜索 Abyāpāda 的结果：
[na+byāpāda，byāpādapaṭipakkhato na byāpādoti abyāpādo. abhi，ṭṭha，1.194. byāpādassa paṭipakkhoç kiñcipi na byāpādeti etenāti vā abyāpādo. ma，ṭī，2.68. sayaṃ na byāpajjati tena vā taṃsamaṅgīpuggalo na kiñcibyāpādetīti abyāpādo. saṃ，ṭī，2.136. abyāpādadhātu abyāpādavitakkaeiea a.]
[န+ဗျာပါဒ၊ ဗျာပါဒပဋိပက္ခတော န ဗျာပါဒေါတိ အဗျာပါဒေါ။ အဘိ၊ဋ္ဌ၊၁။၁၉၄။ ဗျာပါဒဿ ပဋိပက္ခော，ကိဉ္စိပိ န ဗျာပါဒေတိ ဧတေနာတိ ဝါ အဗျာပါဒေါ။ မ၊ဋီ၊၂။၆၈။ သယံ န ဗျာပဇ္ဇတိ တေန ဝါ တံသမင်္ဂီပုဂ္ဂလော န ကိဉ္စိဗျာပါဒေတီတိ အဗျာပါဒေါ။ သံ၊ဋီ၊၂။၁၃၆။ အဗျာပါဒဓာတုနှင့် အဗျာပါဒဝိတက္ကတို့၏ အဖွင့်များ။]
abyāpāda：＇hatelessness＇，non-ill-will，goodness； is one of the three kinds of right thought （s. sacca，IV. 2），or wholesome thoughts （vitakka，q.v.） and is the 9th of the 10 wholesome courses of actions （kammapatha II. q.v.）. The most frequently used synonyms are adosa （s. mūla） and mettā （s. brahma-vihāra）.
abyāpāda：vô sân，không sân độc，không oán hận
ဗျာပါဒ-ဒေါသ-၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်-တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ-မပျက်စီးစေတတ်-မဖျက်ဆီးတတ်-မပျက်စီးစေကြောင်းဖြစ်-မဖျက်ဆီးကြောင်းဖြစ်-သော တရား။ （က） မိမိ-သူတစ်ပါး-၏-ကိုယ်-စိတ်-ချမ်းသာမှု-ပစ္စုပ္ပန်-တမလွန်-အကျိုး-ကျော်စောသတင်းကို-မပျက်စီးစေတတ်-မဖျက်ဆီးတတ်-သော-တရား၊ အဗျာပါဒတရား။ （ခ） မေတ္တာ။ （ဂ） မေတ္တာစေတောဝိမုတ္တိ，မေတ္တာပုဗ္ဗဘာဂ။ （ဃ） ဘုရားအလောင်းတို့ ဖြည့်ကျင့်သော မေတ္တာပါရမီ။ （င） မနောသုစရိတ် ၃-ပါးတို့တွင် တစ်ပါးအပါအဝင်ဖြစ်သော အဗျာပါဒ။ （စ） ဓမ္မပဒ၄-ပါးတို့တွင် တစ်ပါး အပါအဝင်ဖြစ်သော-အမျက်မထွက်ခြင်း-အဒေါသ-မေတ္တာ-မေတ္တာကို ဦးတည်ပြု၍ ရအပ်သော ဈာန်စသည်။ မေတ္တိတို့လည်းကြည့်။ အဗျာပါဒဓာတု，အဗျာပါဒဝိတက္က-တို့လည်းကြည့်။
ရန်ငြိုးကင်းခြင်း။ သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်စေလိုသော စိတ်မရှိခြင်း။
与 Abyāpāda 相似的巴利词：